योगेश भट्टराईको प्रश्न : केपी ओली होस र सन्तुलनमा त हुनुहुन्छ ? — Imandarmedia.com
योगेश भट्टराईको प्रश्न : केपी ओली होस र सन्तुलनमा त हुनुहुन्छ ?
चितवन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय नेता योगेश भट्टराईले ‘प्रधानमन्त्री केपी ओली होसमा त हुनुहुन्छ ? सन्तुलनमा त हुनुहुन्छ ?’ भनी गम्भीर प्रश्न गरेका छन् । सोमबार भरतपुरमा आयोजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहको नगरस्तरीय अगुवा पार्टी कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।
‘आजको लडाइँ क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको लडाइँ हो । केपी ओली होसमा त हुनुहुन्छ ? सन्तुलनमा त हुनुहुन्छ ?’ नेता भट्टराईले भने, ‘मैले मेरो प्रधानमन्त्रीले मानसिक सन्तुलन गुमाउनु भयो भनेर भनेको छैन । मैले मेरो प्रधानमन्त्रीमा पागलपन सवार भयो भनेको पनि छैन । तर हिजो उहाँले जुन भाषण गर्नुभयो, जे शब्द प्रयोग गर्नुभयो, त्यो अति भयो । अशिष्टता, गालीगलौज, अमानवियता, निकृष्टता सिकाइरहनु भएको छ प्रधानमन्त्री ओलीले ।’
‘हाम्रो रगत र पसिना बगाएर बनाएको संविधान आज एउटा व्यक्तिको सनकमा च्यातिन पुगेको छ । संविधानमा हुँदै नभएको कुरा प्रयोग गरेर पुस ५ गते संसद विघटन गर्ने काम भएको छ’ नेता भट्टराईले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न सक्ने व्यवस्था धारा ५३ को ४ मा थियो २०४७ को संविधानमा । २०७२ सालको संविधान बनाउँदा यो राख्ने कि नराख्ने भनेर बहस भयो । त्यो बहसमा केपी ओली र सुवास नेम्वाङ अग्रपंक्तिमा हुनुहुन्थ्यो । २०७२ को संविधानमा त्यसलाई हटाइयो । आज प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को ७ अनुसार विघटन गरेँ भन्नुहुन्छ । त्यो धाराले पनि उहाँलाई संसद भंग गर्ने अधिकार दिएको छैन । विकल्पहरुमा जानु पर्छ । खोइ विकल्पमा गएको ?’
प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताउँदै नेता भट्टराईले प्रश्न गरे, ‘जसप्रति जवाफदेही हुनु पर्ने हो उसैलाई फाँसी चढाउन पाइन्छ ? पाइँदैन । हामी सबै संविधानको मातहतमा छौँ ।’ आज पार्टीमा बहुमत आफूहरुसँग रहेको उनले बताए । अल्पमतको भरमा बहुमतमाथि शासन गर्न खोज्ने ओलीबाट बहुदलीय जनवादको घाँटी निमोठ्ने काम भएको नेता भट्टराईको भनाइ थियो ।
बादल न गर्जिन्छ, न बर्सिन्छ
नेता भट्टराईले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलप्रति लक्षित गर्दै अहिलेका बादल गर्जन र बर्सन नसकेको बताए । उनले भने, ‘यो जिल्ला बादलको जिल्ला पनि हो । त्यो बादल न गर्जिन्छ, न बर्सिन्छ । हामीलाई लागेको थियो त्यो बादल गर्जिन्छ । विगतमा त्यो बादल गर्जिएको थियो । हामीलाई लागेको थियो त्यो बादल बर्सियोस् । विगतमा धेरै वर्षा गराएको थियो त्यो बादलले । तर त्यस्तो भएन यसपालि । गोठमा बाँधेको भैँसीजस्तो मज्जाले कुँडो खाएर बसिरहेको छ त्यो बादल । त्यसले छिट्टै गोठबाट दाम्लो चुँडाएर भागोस् । बँधुवा मजदुर जस्तो भएर त्यो बादल बस्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
यस्तै नेकपकी केन्द्रीय नेता रामकुमारी झाँक्रीले देश कमेडी (हास्यव्यंग्य) ले होइन, सोचले बन्ने बताएकी छिन् । सोमबार भरतपुरमा आयोजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहको नगरस्तरीय अगुवा पार्टी कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले कमेडी गरिरहनु भएको छ, देश कमेडीले बन्ने होइन सोचले बन्ने हो’ नेता झाँक्रीले भनिन्, ‘देश बनाउन भ्रष्ट नहुने चरित्र चाहिन्छ । सबै स्रोत कब्जा गर्ने भ्रष्ट चरित्रले देश बन्दैन ।’ सत्तरी करोडको डिल भएको अडियो सार्वजनिक भएर भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई काखी च्याप्ने प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार हुन नदिने भन्नु नै हास्यास्पद भएको उनको भनाइ थियो ।
ओली समूहबाट म्यादी केन्द्रीय सदस्य थप्ने काम भएको भन्दै नेता झाँक्रीले भनिन्, ‘पार्टी यसरी बन्दैन । पार्टी बन्न सबैभन्दा पहिले विचार चाहिन्छ । चिन्ह ठूलो कि राजनीति ठूलो ? भनेर विचार गर्नुहोस् । कम्युनिष्ट पार्टी मूल्यले बन्छ, विचारले बन्छ । चिन्ह जेसुकै भएपनि राजनीति ठूलो हो । लठैतहरुले तलाबन्दी गरेर पार्टी कब्जा त गर्लान् तर राजनीति रहेन भने ती पार्टी कार्यालय भुत बंगलामा परिणत हुने छन् ।’